ओली सरकारको विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन - Ratopati
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको एक घटक तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव हालै दिल्ली भ्रमणबाट फर्किएका छन् । के के भयो दिल्लीमा, दिल्लीले के गर्न भनेको छ तथा ओली सरकारको विकल्प लगायतको विषयमा रातोपाटीका लागि एसके यादवले आइतबार गरेको कुराकानी :
तपाईंंहरू चारदिने दिल्लीभ्रमणबाट फर्केलगत्तै त वार्ता केही सकारात्मक देखियो, फेरि एकाएक बिग्रियो किन ?
हाम्रो दिल्लीभ्रमण कुनै वार्ता र सहमतिका लागि भएको होइन । नेपालमा जारी मधेस आन्दोलनबारे भारतमा विभिन्न टीका–टिप्पणी र भ्रमहरू भएका कारण त्यही टीका–टिप्पणी र भ्रम हटाउनका लागि हामी दिल्ली गएका थियौं । तर, त्यहाँ गएपछि यहाँका सरकार अथवा तीन दल भनाउँदाले भारतीय सरकारलाई सहमतिका लागि चारबुँदे पत्र बुझाएको थाहा भयो । हामीलाई अच्चम लाग्यो, यहाँ राष्ट्रवादी कुरा गर्ने नेताहरू भारतमा गएर यसरी लम्पसार परेका छन् । मधेसी आन्दोलनरत शक्तिलाई यी चार बुँदामा सहमतिमा ल्याइदिनुपर्यो भनी त्यहाँका सरकारलाई आग्रह गरिएको थियो । हामी त्यहाँ जाँदा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले चारबुँदे देखाउँदै भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारको तर्फबाट सहमतिका लागि यस्तो पत्र आएको छ, यसमा तपाईंंहरूको धारणा के छ, यसमा तपाईंंहरूको सहमति हुन्छ कि हुँदैन ?’ हामीले भन्यौँ, ‘यो चारबुँदेको बारेमा थाह छैन यही आएर थाह पायौं । हामीले त तीन दलका नेता तथा सरकार पक्षलाई पनि ११ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छौँ । हामी त्यसमा सहमति गर्न खोजेका छौँ । त्यसमा सहमति भए मात्र हामी छलफल गर्छौं ।’
चारबुँदे बाहिर आइसकेको अवस्था छ, भारतीय विदेशमन्त्रीले ती चारबुँदे सहमतिका लागि पत्र तपाईंंहरूलाई देखाउनुको कारण के हो ?
मलाई त कुनै कारण होलाजस्तो लाग्दैन । नेपाल सरकारले यसमा सहमति गर्न सकिन्छ कि भनेर भारतलाई गुहारेजस्तो देखियो र भारतले पनि हामीलाई देखाएको हो, सुनाएको हो, बुझाएको हो । तर, हामीले त्यसलाई सीधै इन्कार गर्यौं । हामीलाई चारबुँदेसँग कुनै सरोकार छैन । र, उहाँहरूले पनि हामीलाई यसैमा सहमति गर वा नगर केही भन्नु भएन । खालि हामीलाई सोध्नुभयो हामीले त्यसमा नाइँ भन्यौँ ।
नेपाल सरकारले दिएको चारबुँदे पत्र देखाउनलाई र बुझाउनलाई नै तपाईंहरूलाई त्यहाँ बोलाएको हो त ?
– होइन, हामीले आफ्नो कुरा राख्न त्यहाँ गएका हौँ । भारतमा आन्दोलनबारे उठेका भ्रमका कुरालाई चिर्नका लागि हामी त्यहाँ गएका हौँ । चारबुँदेमा कुनै कुरा गर्न गएका होइनौँ । हामी गएका बेला त्यो देखाइएको मात्र हो । हामी तीन महिनासम्म आन्दोलन गर्यौं । नेपालमा त्यसको विभिन्न टीका–टिप्पणी त हुन्थ्यो नै, तर भारतमा पनि विभिन्न भ्रम फैलाउने काम भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले थाह पायौँ । यहाँबाट जाने नेताहरू आन्दोलनबारे विभिन्न भ्रमात्मक कुराहरू गर्नुभएको रहेछ । जेएनयुमा जाँदा त्यहाँका विद्यार्थीहरूले तपाईंंहरू आउनमा ढिलो गर्नुभयो । उहाँहरू कतिपटक आएर विभिन्न भ्रमका कुराहरू राखेर जानुभएको छ । त्यसपछि सही कुरा के हो ती सबै कुरा हामी त्यहाँ राख्यौँ । त्यहाँका मिडियामा एक प्रकारको भ्रम थियो, बुद्धिजीवीहरूमा पनि भ्रम थियो, हामी सबैलाई भेटेर ती भ्रम हटाउने काम गर्यौँ । अब मधेस आन्दोलनबारे भ्रम हटेको छ ।
यहाँ राष्ट्रवादी कुरा गर्ने नेताहरू भारतमा कसरी लम्पसार परेका रहेन् भन्ने भारत पुगेर थाहा पायौं
भारतले हामीलाई सहमति गर भनेको छैन
मोदीलाई हामीले नै भेट्न नचाहेको हो
अब भारतका जनताले पनि नेपाल सरकारको विरोधमा आन्दोलन गर्छ
त्यसो भए भारतले तपाईंंहरूलाई बोलाएको होइन, तपाईंंहरू आफैँ जानुभएको हो ?
– होइन, हामी भारत सरकारकै निमन्त्रणामा त्यहाँ गएका हौँ । हामी जाँदा भारतले नै सबै व्यवस्था गरेको थियो । अरू दलहरू पनि यस्तै गरी त्यहाँ गएर मधेसबारे विभिन्न भ्रमहरू छरेका रहेछन् ।
तपाईंंहरू भारत सरकारको निमन्त्रणामा जानुभयो, त्यहाँ भारत सरकारको सेवा–सुविधा लिनुभयो, अनि सरकार प्रमुख मोदीलाई नै भेट्न पाउनुभएन किन ?
– वास्तवमा भन्ने हो भने मोदीसँग हामीले भेट्ने इच्छै जाहेर गरेनौँ । समयको अभावले गर्दा मोदीलाई हामीले भेट्न नचाहेकै हो । भेट्ने आवश्यकता नै ठानेनौँ । जुन कुरा मोदीलाई हामी भन्थ्यौँ, त्यो कुरा उहाँसमक्ष पुगिसक्यो भने, किन भेट्नु भनेर हामीले भेटेनौँ ।
मोदीसँग भेट्नका लागि एक दिन त्यतिकै खेर फाल्नुभयो भन्ने कुरा आइरहेका छन् नि ?
– त्यसमा कुनै सत्यता छैन । मोदीलाई भेट्ने कुरा सेड्युलमै थिएन । अनि कसरी भेट्ने ? यदि हामीले भेट्न चाहेको भए सेड्युलमा राख्न सक्थ्यौँ नि, तर हामी त्यसो गरेनौँ । हामीले भेट्ने इच्छा नै देखाएनौँ । यहाँका हल्लाहरू बेकारका हल्ला हुन् ।
तपाईंहरूले दिल्लीमा जति नेतासँग कुरा गर्नुभयो, सुष्मा स्वराजबाहेक अरु सबै नेताले तपाईंहरूसँग भएको कुराविपरीत राज्यसभामा बोल्नुभयो, किन त्यस्तो ?
– सुष्मा स्वराजले त संसद्हरूले उठाएको कुराको जवाफ दिनुभयो । अरु जतिजना बोल्नुभएको छ, त्यसमा तीनजनाबाहेक अरु सबैले मधेसको पक्षमा, मधेस आन्दोलनको समर्थनमा बोल्नुभएको छ । दक्षिण भारतका संसदहरूसँग हाम्रो कुरा नै भएको थिएन । उताका नेताहरू अलि विपक्षमा बोल्नुभयो । सबैको आफ्नो बोल्ने स्वतन्त्रता हुन्छ, पार्टीको नीति हुन्छ । प्रतिपक्षको धर्म निभाउने कुरा हुन्छ, त्यसले पनि बोलेका होलान् ।
राज्यसभामा त्यो दिन १४ संसदले बोलेका थिए, त्यसमा १० जनाले खुलेर मधेस आन्दोलन र सरकारको विरोध गरे । यसले त तपाईंहरूको भ्रमण असफल भएको देखिन्छ त ?
– विपक्षी दलहरूको आफ्नो धर्म र कर्तव्य हुन्छ । जहाँ पनि राजनीतिमा त्यस्तै हुन्छ । संसद् वा कुनै ठाउँमा औपचारिक बोल्दा पार्टीले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेका हुन्छन्, त्यही गरेको होला । उहाँहरूको एउटै कुरा के थियो कि भारत सरकारले नेपालको समस्यालाई राम्रोसँग हेरेन । आफूहरूलाई नेपालको समस्या बुझाउनलाई भारत सरकार असफल भएको उहाँहरूको कुरा हो ।
भारत सरकारले नेपालको समस्या नबुझेको हो त, तपाईंहरूलाई के लाग्छ ?
– भारत सरकारले नेपालको समस्याबारे राम्रोसँग बुझेको छ । नेपालमा अहिले देखिएको समस्याबारे भारतले राम्रो जानकारी लिएर बसेको छ । किनभने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयं दुईपटक नेपाल आउनुभएको छ । यहाँको संविधानसभामा पनि बोल्नुभएको छ । गृहमन्त्री, विदेशमन्त्री, विदेशसचिव लगायत विभिन्न नेता तथा एजेन्सीहरू आएर जानुभएको छ । त्यसैले नेपालबारे भारतले बुझ्नुपर्ने कुनै कुरा बाँकी छैन ।
तपाईंहरूले भारतका एजेन्सीहरूलाई छुट्टाछुट्टै भेट्नुभयो भन्ने पनि कुरा आइरहेका छन् नि ?
– होइन, त्यस्तो हामी कुनै एजेन्सीलाई कहीँ छुट्टै भेटेका छैनौँ । हामी जहाँ जाँदा पनि चारैजना जान्थ्यौं । कहीँकतै दुईजना, तीनजना पनि गयौँ । फर्कने दिन केही नेतालाई आ–आफ्नो तरिकाले छुट्टाछुट्टै भेट्यौँ । तर, एजेन्सीलाई त्यसरी भेटेका होइनौँ ।
त्यसो भए तपाईंहरू फर्कने दिन भारतले के भनेर बिदाई गर्यो त ?
– बिदाई गर्दासम्म उहाँहरूको एउटै धारणा थियो कि छिटोभन्दा छिटो नेपालको समस्या समाधान होस् । आन्दोलन धेरै लामो भयो । वार्ता पनि धेरै भयो, अब यसलाई वार्ताको माध्यमबाट चाँडै टुग्यांइदिनुपर्छ । यही चिन्ता उहाँहरूले नेपाल सरकारसँग पनि जाहेर गर्नुभएको छ । उहाँहरूले यसमा सहमति गर्नुस्, त्यसमा सहमति नगर्नुजस्ता कुनै कुरा भन्नुभएको छैन । उहाँहरूको चिन्ता पनि चाँडै समाधान होस्मा नै थियो ।
दिल्लीबाट फर्केपछि ओली सरकारको आयुको कुरा पनि सुरु भएको छ, यसबारे पनि केही कुरा भयो कि ?
– त्यस्तो कुनै कुरा भएको छैन । हामी चाहन्छौँ, यो सरकार रहोस् । हामी सरकारको खेलमा लाग्नु हुँदैन । यी तीन दलले सविधान बनाएको हो, अब यी तीन दलले समस्याको समाधान गर्नुपर्छ, हाम्रो माग यति हो ।
यही सरकारले मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्छ त ?
– हामीले आजसम्म गरेको वार्ताको आधार हेर्दा र क्रियाकलाप हेर्दा विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । सरकारले विश्वास गुमाएको छ । तर, हामी चाहन्छौँ, यी तीन दलले मिलेर मधेसको समस्या समाधान गरुन् ।
सरकारले विश्वास गुमाएको छ पनि भन्नुहुन्छ, त्यसो भए सरकारको विकल्प खोज्ने बेला भएको हो ?
– अहिलेसम्म सरकारले विश्वास कायम गर्न सकिरहेको छैन । तर, हामी यो सरकारको विकल्प खोज्ने पक्षमा छैनौँ । यही सरकारले समस्या समाधान गर्नुपर्छ । हाम्रा लागि यो सरकार होस् वा अरु सरकार, सबै उस्तै हो । तीन दलमध्ये जोसुकैले पनि सरकारको नेतृत्व गरोस्, हाम्रा लागि उस्तै हो । त्यसैले विकल्प खोज्ने होइन, तीन दलले समाधान दिनुपर्छ ।
सरकारले सम्बोधन गर्ला भनेर कहिलेसम्म प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ ?
– हामीले विश्वास गुमाउने अवस्था नआवोस् । हामी यही भन्न चाहन्छौँ । हामीले सविधान संशोधन गरेर मधेसको समस्या समाधान होस् भन्ने चाहेका छौँ । हामी अझैसम्म आशा गरेर बसेका छौँ । जुन दिन हाम्रो आशा निराशामा बदलिन्छ, त्यसपछि हामी यो संसद्को बारेमा सोच्न बाध्य हुन्छौँ । मधेसी मोर्चाले यसबारे छलफल गर्न सक्छ ।
तपाईंले सरकारको विकल्प नखोज्ने भन्नुहुन्छ, तपाईंकै मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादवले पुस ५ भन्नुभयो कि मधेसको समस्या समाधान होस् या नहोस् यो सरकार ढल्छ, यस्तो किन ?
– कसले कहाँ के बोल्नुभयो त्यो मलाई थाह छैन । त्यो मधेसी मोर्चाको आधिकारिक धारणा होइन । अहिले सरकार ढाल्ने खेलमा लाग्नु हुँदैन । यो राम्रो पनि हुँदैन । कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनमा हामीले मत हालेपछि मधेसमा चारैजना नेताको पुत्ला जलेको कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन ।
यो नाकाबन्दी र हडतालले गर्दा तस्करी निकै मौलाएको छ, त्यसमा मधेसी मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ता पनि लागेको छ भन्ने सुनिन्छ के यो सही हो ?
– तराई मधेसमा लामो समयदेखि आन्दोलन भइरहेको छ । नाकाबाट विभिन्न किसिमले तस्करीहरू भइरहेका छन्, त्यसमा मधेसी मोर्चा होइन, सरकार नै लागेको छ । सरकार नै आधिकारिक रूपमा तस्करी गरिरहेको छ । रातिराति ट्याकंर ल्याउँछन् । वीरगन्जबाहेक सबै नाकाबाट तेल र ग्यास राजधानी भित्रिरहेका छन् । तर ती सबै कहाँ जान्छन् ? कसैले खोजेको छैन । राज्य संयन्त्रकै मिलेमतोमा कालोबजारी भइरहेको देखिन्छ । हामी कालोबजारी रोक्न कतिपयलाई कारबाही पनि गरेका छौँ र अझै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छौं । यत्रो आन्दोलन भइरहेको छ । नाकाहरू उथलपुथल भएका छन् । मधेसी मोर्चाका कुनै कार्यकर्ता लागेका पनि होलान्, तर त्यसलाई हामी नियन्त्रण गर्छौं । जसरी मधेसी मोर्चामाथि आरोप लागिरहेको छ, त्यो सरासर गलत हो ।
तपाईंहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको छ, त्यसमा राजमार्गकेन्द्रित आन्दोलन र नाकाबन्दीबारे चर्चा गरिएको छैन, यी सबै खुल्ला भयो कि कसो ?
– होइन, हाम्रा सबै आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत छन् । हामीले योबीचमा आन्दोलनमा केही शिथिलता आएका कारण थप कार्यक्रम तय गरेका हौँ । अरु जस्ताको त्यस्तै छ । अब केही दिनमा योभन्दा झन् कडा आन्दोलन हुन्छ । जसलाई राज्यले सम्हाल्न सक्दैन ।
यो कस्तो नाकाबन्दी हो, वीरगन्ज नाकाबाहेक सबै नाकाबाट समान तथा इन्धन आइरहेका छन् ?
– स्वाभाविक रूपमा वीरगन्ज नाकाबाहेक अरु नाका खुलाजस्तो देखिन्छ तर हामीले खोलेका छैनौँ । हामी जुन दिन त्यहाँ बस्छौँ, त्यो दिन बन्द रहन्छ । जुन दिन त्यहाँबाट उठ्छौँ, त्यो दिन खुला हुन्छ । तर, त्यसको बारेमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ । अब सबै नाका बन्द हुने गरी आन्दोलन अगाडि बढ्छ । अब भारत बिहारका जनताले पनि नेपाल सरकारको विरोधमा आन्दोलन सुरु गर्छन् । मेची महाकाली नेपाल–भारतमैत्री अभियान सुरु भएको छ । यो आन्दोलन समयमा सम्बोधन भएन भने भोलि गएर नेपाल नराम्रो स्थितिमा फस्छ । त्यसैले बेलैमा मधेसको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।